जसले नयाँ शक्तिलाई एमालेमा बिलय गराउँदैछन्... | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
जसले नयाँ शक्तिलाई एमालेमा बिलय गराउँदैछन्…
काठमाडौं । नयाँ शक्ति नेपालमा पूर्व माओवादी नेताहरु माओवादीमा फर्किएपछि अवको नयाँ शक्ति लगभग पूर्व एमालेहरुको समुह जस्तै बनेको टिप्पणी सुनिन थालेको छ ।
यसका नेता डा. बाबुराम भट्टराई नै पूर्व माओवादीहरुलाई सृंखलाबद्ध रुमपा कारवाही गर्न थालेपछि पूर्व एमाले नेताहरु भने सक्रिय छन् । र उनीहरु नै अहिले नयाँ शक्तिलाई एमालेसँग एकीकरण गराउन लागिपरेका छन् ।
डम्बर खतिवडा, देवी ओझा, केशव दाहाल लगायत नेताहरु यस प्रक्रियामा भित्री रुपमा सक्रिय बनेका हुन् । एमालेको तर्फबाट शिक्षा मन्त्री समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य देवी ओझा, एमाले सुनसरी जिल्ला सदस्य रहेका डम्बर खतिवडा र एमाले सुनसरी जिल्ला सदस्य नै रहेका केशव दाहाल पछिल्लो समय एमालेका केही नेताहरुसँग नजिक भएका हुन् ।
एमाले नेताहरुसँग उनीहरुका केही अनौपचारिक भेट नयाँ शक्तिलाई एमालेसँग एकीकरण गराउने विषयमा नै केन्द्रित हुने स्रोतले जानकारी दियो । नयाँ शक्तिका नेताहरु भने उनीहरुको यस्तो प्रयासबिरुद्ध केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।
यसका अलावा एमालेमा फर्किएका नयाँ शक्तिका पूर्व नेता निर्मल भट्टराई लगायत नेताहरु समेत यस्तो अभ्यासमा छन् । पछिल्लो समय निर्मल भट्टराई लगायत नेताहरुले दुवै पक्षसँग बार्ता र भेटघाटको व्यवस्था मिलाउँदैआएको बुझिएको छ ।
डा. भट्टराईले गठन गरेको १ सय ५१ जनाको केन्द्रीय कार्यकारी समितिमा बहुसंख्यक पूर्व एमालेहरु नै छन् । त्यसमध्ये पार्टीको निर्णायक तहमा रहेका प्रभावशाली नेताहरुले पनि एमालेमा लामो समय बिताएका हुन् ।
त्यसो त, कानुन अनुसार थ्रेसहोल्डको जटिलताले पनि नयाँ शक्तिलाई राष्ट्रिय पार्टी बन्न अप्ठ्यारो छ । यही अप्ठ्यारो बुझेरै यसका नेताहरुले एमालेसँग एकीकरणको प्रयास गरेको स्रोत बताउँछ ।
यता डा. भट्टराई जसरी पनि प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि एमालेसँग मिल्नु बलियो उपाय हुनसक्ने उनले बुझेका छन् । र पूर्व एमाले कार्यकर्ताहरु भट्टराईको त्यही मनस्थिति बुझेर पार्टी एकीकरणको प्रयासमा लागेका हुन् ।
माधव नेपाल समुहको प्रयास
एमाले अध्यक्ष केपी ओली स्यवं भने नयाँ शक्तिलाई एमालेसँग एकीकरण गराउने पक्षमा खुलेरै देखिएका छैनन् । बरु एमालेमा कमजोर बन्दै गएका पूर्व अध्यक्ष माधव नेपाल र उनी निकटस्थ नेताहरु जोडतोडका साग लागेका छन् ।
एकीकरण प्रयासमा सक्रिय एक नेताका अनुसार आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गरी माधव नेपालले आफू बलियो हुन यस्तो प्रयास गरेका हुन् । नयाँ शक्तिबाट एमालेमा फर्किएका अधिकांश नेताहरु पनि नेपाल समुहमै छन् । – नेपालीपत्रबाट साभार